१० हजारका लागि अनुप र प्रशान्त बिच लडाइँ, कसले मार्यो बाजी ? (भिडियो) » खबरहरुको एउटै केन्द्र
१० हजारका लागि अनुप र प्रशान्त बिच लडाइँ, कसले मार्यो बाजी ? (भिडियो)
मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१ मा प्रकाशित !
काठमाडौँ। एक्सन मुभि ‘जय शम्भू’ को रिलिज डेट सार्वजनिक भएको छ । आइतबार राति आयोजित एक प्रेस जमघटमा फिल्मका निर्माता दिनेश शाही र डिस्ट्रिब्युटर जयन श्रेष्ठले फिल्मको रिलिज मिति घोषणा गरेका हुन । जानकारी अनुसार भदौ १ देखि यो फिल्म अल नेपाल रिलिज हुँनेछ ।
निर्माता जयन श्रेष्ठको कम्पनी जे.एस. ईन्टरटेन्मेन्टले गोपालकाजी कायस्थको कम्पनी वि.के. फिल्मसँग सहकार्य गर्दै यही फिल्मबाट डिस्ट्रिब्युसनमा हात जयन श्रेष्ठ नेपाली फिल्म नगरीका नयाँ जोसिला युवा निर्माता हुन जसले यस अघि किग नामक फिल्म पनि बनाएका थिए ।
उनका अनुसार उनी र गोपाल काजी कायस्थको कम्पनीले आगामी फिल्महरूमा समेत सहकार्य गर्ने गरी फिल्म डिस्ट्रिब्युसनमा हात हालेको हो ।जय शम्भूमा दुई चर्चित भिलेन प्रशान्त ताम्राकार र अनुप विक्रम शाही लिड रोलमा छन् । हिरोइन चाँहि वर्षा शिवाकोटी हुन । यस्तै यसै फिल्मबाट निकै राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्री अञ्जु केसी महर्जनका छोरा रोशन महर्जनले पनि धमाकेदार डेब्यु गर्दैछन् ।
रुपेश तामाङको निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा प्रशान्त ताम्राकार र अनुप विक्रम शाहीलाई सशक्त तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । हेर्नुस् दश हजारका लागि दरबार मार्गमा भएको दुई भिलेनको लडाइँको भिडियोः
PREVIOUS POST Previous post: एमाले–माओवादी एकताबाट को–को नेता असन्तुष्ट ?
NEXT POST Next post: यो रगत समूह भएकालाई कडा खालको ब्याक्टेरिया संक्रमणको खतरामा
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, जेष्ठ ८, २०७५ १२:४१